२ बर्षसम्म ट्वाइलेट गएनन् यि व्यक्ति, कसरी बाँचिरहे त यि? – Nepal Journal
Posted By: Nepal Journal May 23, 2018 | ९ जेष्ठ २०७५, बुधबार १७:०३
कुनै पनि मानिस एक दिन दुई दिन वा केही दिनसम्म ट्वाइलेट नजादा त उसलाई सामान्य जीवन बाँच्न नै मुस्किल हुने गर्दछ । तर हैरानीको कुरा एकजना व्यक्ति दुई बर्षदेखि ट्वाइलेट नै गएका छैनन् । तपाईले नै अन्दाज लगाउन सक्नुहुन्छ कि, उसको के हालत भयो होला ।
कब्जियतको बिमारीले मानिसहरुलाई आफ्नो चपेटामा लिइरहेको छ । खासमा आधुनिक जीवनशैलीका कारण मानिसहरुको शारिरीक गतिविधिमा कमी भइरहेको छ । यदि पेट नै सफा छैन भने मानिसहरुलाई कुनै पनि काममा मन लाग्दैन । तर एकजना व्यक्ति दुई बर्षदेखि ट्वाइलेट नै गएका छैनन । उनको हालत झन् के भयो होला ?
स्टे वाकर नामक एकजना २४ बर्षीय व्यक्ति वेस्ट योर्कशायरमा रहदै आएका छन् । सन् २०१२ मा वाकरलाई क्रोन नामक गम्भीर बिमारी भएको थियो ।
यस बिमारीका कारण वाकर बिस्तारै डिप्रेसनमा जाँदै थिए । यद्यपी उनले हार मानेनन् र यस बिमारीसँग लड्ने निर्णय गरे । उनको यो कहानी सुनेर सायद तपाईहरुलाई पनि आफ्नो जिन्दगीमा केही प्रेरणा मिल्नसक्छ ।
यो आन्द्रासँग सम्बन्धित बिमारी हो । जसमा पाचनतन्त्र सुन्निदै जाने गर्दछ । यो यति धेरै खतरनाक बिमारी हो कि, यसका कारण वाकर २ बर्षसम्म पनि ट्वाइलेट जान पाएनन् ।
यस बिमारीका कारण नै वाकरले २ बर्षमा ८० भन्दा बढी सर्जरी गराउन परेको थियो । जसमा हरेक पटक उनको सुन्निएको आन्द्रा काटेर निकालिने गरिन्थ्यो । जसले गर्दा उनी सन् २०१२ देखि २०१४ सम्म ट्वाइलेट जान पाएनन् ।
यद्यपी जब वाकरलाई स्वास्थ्यमा समस्या हुन्थ्यो तब उनी सर्जरी गराउथे र पाचन तन्त्रमा जमेको मललाई बाहिर निकाल्ने गर्दथे । उनको यो बिमारी र उनले भोगेका समस्या हाल सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय बनेको छ । एजेन्सी
Be the first to comment on "२ बर्षसम्म ट्वाइलेट गएनन् यि व्यक्ति, कसरी बाँचिरहे त यि?"